AMBODIN’ISOTRY Mpanendaka sy mpanao herisetra 7 no tratra, vehivavy ny iray
Mpanendaka miisa fito no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny kaomisaria Ambodin'Isotry ny talata 25 sy omaly alarobia 26 febroary tetsy amin’ny AIGLE
noho ny resaka fanendahana. Fanampim-baovao azon’ny polisim-pirena no nahalalana fa misy andiana mpanendaka mijorojoro eny amin’iny faritra Isotry iny. Tokony ho tamin’ny 4 ora hariva no nidina teny an-toerana ny polisy nanao fanamiana sivily hanamarinana ny vaovao. Hita teny an-toerana tokoa ireo olon-dratsy ka raikitra ny fisamborana. Tra-tehaka ireo mpanendaka miisa 4 ka fantatra tamin’izany fa efa nifonja tamin’ny taona 2003 ny iray tamin’izy ireo. Araka ny loharanom-baovao ihany dia efa nanendaka teo amin’ny AIGLE NOIRE ny marainan’io andro io ireto olon-dratsy ary izao mbola nikasa ny hiverina hanendaka izao indray no tratran’ny polisy. Omaly alarobia tokony ho tamin’ny 11 ora maraina ihany koa dia nahazo vaovao indray ny polisy satria fantatra fa mbola misy mpanao asa ratsy indray manao ny asany tsy lavitry ny toerana nahasamborana ireo mpanendaka efa-dahy ireo . Nanao bemidina ny polisy ka olona miisa 3 izay mpanendaka sady mpanao herisetra no voasambotra. Ny 2 amin’izy ireo dia lehilahy ary 1 vehivavy. Tsy vaovao amin’ny polisy intsony ihany koa ny iray amin’izy ireo fa efa matetika mamerin-keloka amin’ny asa fanendahana ary vao tsy ela akory no nivoaka ny fonja. Natao fanadihadiana avy hatrany moa izy ireo, omaly.